I-cumbia, isingqisho sendabuko seColombia | Ukuhamba kwe-Absolut
Ngaphandle kwamathandabuzo isingqisho somculo siqhagamshelene kakhulu Kholambiya, kwinkcubeko yayo nakubantu bayo, yi-cumbia. Akukho mbhiyozo okanye umbhiyozo kweli lizwe apho iingoma azivakali kwaye zingqungqe kwisandi sika Icumbia yaseColombia. I-icon yesazisi sayo.
Olu hlobo lomculo lunomdla kunye nomdaniso wesintu wazalelwa kunxweme lweCaribbean, kodwa akuzange kube kudala ngaphambi kokuba ithandwe kwilizwe liphela. Kule posi siza kuthetha nawe malunga nemvelaphi yayo, izithethe zayo kunye nezinye izinto ezininzi ezinxulumene necumbia yaseColombia.
1 Imvelaphi yeCumbia yaseColombia
2 ICumbia yaseColombia: izixhobo
3 I-cumbia yaseColombia: iilokhwe zesiko
4 I-cumbia yaseColombia: umdaniso
Imvelaphi yeCumbia yaseColombia
Njengazo zonke izinto zobugcisa kunye nezenkcubeko emhlabeni, i-cumbia sisiphumo sokuxuba. Ukulandelela imvelaphi yayo kufuneka uhambe uye kwinkulungwane ye-XNUMX, ukuya kunxweme lweAtlantic kwinto ngoku eyiColombia. Kwakukho apho izinto zenkcubeko ze izithethe ezintathu eyahlukileyo kakhulu: Umhlalii wasemelika, la EYurophu (ngesandla ngeSpanish) kunye umntu waseAfrika, eziswe ngamakhoboka awayeziswe kwihlabathi elitsha.
Idolophu nganye okanye isithethe senkcubeko sinegalelo kwinto eyahlukileyo. Iingoma zinokusekwa kwizingqi zesintu, ngelixa imixholo kunye namazwi eengoma aneengcambu ngokucacileyo zaseSpain. Okokugqibela, umlinganiswa ophambili we intshukumo kunye nemidaniso yaseAfrika Bayigqibile iresiphi ethi ekugqibeleni iya kuthi inyuse i-Columbian cumbia.
Nantsi ke indlela yokuzalwa kwesiphumo esimnandi somxube osisityebi nolwahlukileyo.
ICumbia sesona siqhelo somculo wesithethe eColombia
Nangona kunjalo, i Imvelaphi ye-Etymological Igama elithi cumbia alibonakali licacile. Uninzi lwabaphengululi lukhusela ukuba luvela kwikota kumbé, elithetha "ipati" okanye "isandi" kwiilwimi ezininzi zaseAfrika.
Into engaphaya kwamathandabuzo yimpumelelo emangalisayo yomsitho, osusela ekuzalweni kwawo eColombia kwasasazeka kule minyaka idlulileyo amanye amazwe amaninzi akuMbindi nakuMzantsi Merika. ICumbia ngoku iyaculwa kwaye yangqungqa kwiindawo ezikude njengeMexico, iPeru, i-El Salvador, iVenezuela, iArgentina okanye iPeru.
ICumbia yaseColombia: izixhobo
Kwakhona umphefumlo ophindwe kathathu (i-Amerian, iYurophu kunye ne-Afrika) ye-cumbia ibonakaliswe ngokugqibeleleyo kwi zixhobo zomculo ezisetyenziselwa ukutolika.
Indima ekhokelayo ngokungathandabuzekiyo yeyokudlala izixhobo zomculo. Isingqisho se imigqomo, Igalelo lenkcubeko yaseAfrika, ngumqolo wazo zonke iingoma. Baseta isingqisho esiphambili kwaye bancedwa zizixhobo zemveli ezinje nge i-millet cane okanye iipayipi, ongathandabuzekiyo ovela eSpanish.
I-caña de millo, isixhobo esisiseko seCumbia cumbia
Kwi-cumbia kukho iintlobo ezintathu ze imigqomo eyona:
El Igubu elimnandi, olandela isingqisho sengoma.
El Ukufowuna iDrum, esetyenziselwa ukuseta isiseko senkxaso yengoma.
La Tambora. Le kuphela kwemigqomo yaseCumbian engenayo imvelaphi yaseAfrika. Yabethwa ngesandla, ngaphandle kokusebenzisa iigubu, eluswini nakwibhokisi yomthi.
Zintathu iindidi ze iipayipi:
Umbhobho wamadoda oyindoda, evakala ngathi yimvelaphi.
Umbhobho wamanzi obhinqileyo, ehamba nomculo.
Umbhobho omfutshane omfutshane, esetyenziswa njengesixhobo esisodwa kwaye inokubaluleka okukhulu kwezi ziqwenga zomculo kuphela.
ICañamillero ngumlingisi obalulekileyo kwiqela ngalinye laseColombia laseCumbia. Ngubani ochukumisa ifayile ye Umhlanga, isixhobo somoya ekubonakala kwaso kukukhumbuza ifluti enqamlezileyo. Njengoko igama layo libonisa, yenziwe nge-millet cane, kodwa inokwenziwa ngethambo okanye ngoqalo. IiMaracas, ikhodiyani kunye nezinye izixhobo ezizezinye zigqiba umfanekiso.
I-cumbia yaseColombia: iilokhwe zesiko
ICumbia ayingomboniso womculo, kodwa ikwangumboniso. Kwaye kweli candelo kulapho abadanisi bangenelela ngeempahla zabo zemveli ezimibalabala. Iimpahla ezisetyenziselwa i-cumbia zikwasetyenziswa kweminye imidaniso yaseColombia.
Isinxibo esiqhelekileyo seCumbia cumbia
Umfazi: iindleko zokuyalela ukuba abadanisi banxibe ilokhwe emhlophe yeklasi enesiketi esibanzi okanye isiketi. Oku kuhlotshiswe ngeerbhoni kwaye, phantse rhoqo, nge-bolero ukubonisa imibala yeflegi yaseColombia (omthubi, obomvu nohlaza okwesibhakabhaka). Banxiba iiblawuzi ezinemikhono ebanzi kodwa ezishiya amagxa engenanto.
Indoda: iimpahla zabo zilula kakhulu. Iqukethe ibhulukhwe emhlophe kunye nehempe kwaye, ukuyinika umbala, isikhafu esibomvu esaziwa ngokuba "ngumsila wenkuku." Isiqwenga esisisiseko sesuti eyindoda sesiko umnqwazi we-vueltiao.
Zonke iinkcukacha kunye nokuhonjiswa kwale lokhwe zidlala indima ebalulekileyo ekuphunyezweni komdaniso we-cumbia.
I-cumbia yaseColombia: umdaniso
Kukho iintlobo ngeentlobo zemidaniso kunye neephrofayili ezinxulunyaniswe necumbia yaseColombia. Ezi zimele ngakumbi enye ukuthandana umdaniso. Amadoda nabasetyhini bangena kwinqanaba ukusuka ii-engile ezichaseneyo. Baye ke bahlangane embindini kwaye badanise bejikeleza omnye komnye ukuya kubetha amagubu. Kule vidiyo sinomzekelo omhle walomdaniso:
Phakathi iindlela zommandla okanye okwahlukileyo Ezona zibalaseleyo zeCumbia cumbia zibandakanya oku kulandelayo:
I-cumbia yakudala, akaculwa. Isixhobo esifanelekileyo.
ICumbia sabanera, apho kusetyenziswa isixhobo esinqabileyo esibizwa ngokuba ligqabi lemon. Idanisa kumasebe aseSucre, eCórdoba naseBolívar.
ICumbia vallenata, apho ikhodiyani (esona sixhobo siphambili sevallenatos) ithatha inxaxheba. Ngaphakathi kolu luhlu lweCumbia cumbia kukho izinto ezininzi ezahlukeneyo.
Cumbiamba. Ungqungqe ngohlobo lomdaniso wekwayala obonisa kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » I-cumbia, isingqisho sendabuko saseColombia
I-Cumbia, ukuba ngumdaniso oqhelekileyo waseColombia, inokudaniswa liqela labafazi abane okanye i-homble iyimfuneko.
nati melcon sitsho
Che que vuena pag eArgentina basibeka ukuba sifumanise malunga ne-cumbia yintoni elungileyo pag
Phendula i-nati melcon